Vaovao - Fivoarana ara-tantara sy fitandremana ny milina fanaovana fantson-drano
Masinina fanaovana savony simenitra vokatra lehibe dia mitsangana radial extrusion fantsona fanaovana fitaovana, tokana sy indroa miovaova fitaovana mandrora hovitrovitra, fitaovana hovitrovitra avy any atsimo, milina vy mandeha ho azy mihodina milina, milina fantsom-by, milina fantsom-boalavo, famenoana milina fantsom-boaloboka vy, milina fanaovana fantsom-bokotra mihodina, milina fanaovana fantsom-panafody, gazety anatiny, gazety ivelany ary bobongolo fantsona maro hafa ary milina fananganana fantsom-pamokarana mandrelika hafa.
ny milina fanaovana fantsom-by dia nandalo ny fanatsarana ny taranaka nifandimby avy amin'ny milina mihantona mihantona amin'ny fiandohan'ny varotra mandrelita mankany amin'ny masinina extrusion radializao. Satria nyfamolavolana fantsom-pamokarana vovoka mihomboNy fizotrany dia mandray lasitra fantsona roa tsy mitongilana, ny hamafin'ny lasitra dia tena sarotra ovaina, ary ny bobongolo iray ihany no ilaina amin'ny famaritana iray, noho izany ny fenon'ny boribory sy ny savaivon'ny fantsom-bozaka vita amin'ny beton. Ho fanampin'izay, ny mitsanganamilina fantsom-panafody radial mandroso amin'ny beton ao anaty milina fantsom-by aorian'ny faran'ny lalan'ny axial an'ny beton dia mihodina extrusion, mampitombo kokoa ny hery sy ny perpendicularity ny nozera, ny fananganana ary ny fametrahana azy tsara.
Ny mari-pana ambany amin'ny ririnina, ho an'ny milina fantsom-panafody radial mitsangana fikojakojana tsy ho latsa-danja. Mila manova ny sivana diesel, ny menaka motera manova ny menaka matevina azo ampiharina, miaraka amin'izay, raha ny rafitra hydraulic dia misy toerana famoahana solika ary miova ara-potoana koa, dia mety amin'ny tank raha hanao asa tsara amin'ny insulation. Zahao ny rafitra fanaparitahana hafanana an'nymilina fanaovana fantsom-by, ary zahao raha mihantitra sy simba ny fantson-tady. Ireo toerana ireo dia mora voan'ny olana amin'ny ririnina. Rehefa mampiasa dia afaka manampy rano mafana ianao mba hahamora ny fanombohana azy. Aza adino ny manondraka rano rehefa manidy. Ny fampiasana ny antifreeze dia tsy soso-kevitra satria hanasarotra ny fananganana motera.
Fotoana fandefasana: Mar-01-2021
Hex Bolts, Masinina Sodina Pipe, Bolt firafitra, U Bolts, Lag Bolts, Bolts amin'ny kalesy,